Radanoara Julien: “Tsy fananana idelojia raikitra ny fahamaroan’ny kandidà” | NewsMada
Radanoara Julien: “Tsy fananana idelojia raikitra ny fahamaroan’ny kandidà”
Maro ireo kandidà hirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika amin’izao… Inona loatra ny mahatonga izany? Maneho ny fijeriny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien: “tsy fananana idelojia raikitra ny fahamaroan’ny kandidà”. Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny amin’ny fahamaroan’ny kandidà hirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika amin’izao?
Radanoara Julien (-):Ny anisan’ny mahatonga izay, misy amin’ireo kandidà ireo vatom-panorona aroson’ireo firenen-dehibe ireo. Ao anatin’izany, ohatra, ny fizarazarana ny vato azon’Antananarivo.
Manaraka izany, eo koa ny fivarotana vato amin’ny fifidianana fihodinana faharoa. Misy efa fantatra ary mahafantatra ny tenany izao fa tsy ho voafidy eo, ao aza ny tsy fantatry ny olona akory… Nefa mirotsa-kofidina izy mba hahazoany mivarotra vato amin’izay fihodinana faharoa izay.
Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena indray, midika izao fahamaroan’ny kandidà izao fa tsy manana karazana ideolojia raikitra na matotra isika eo amin’ny lafiny politika. Tokony hoe hery ankavia sy hery ankavanana ary hery afovoany, ohatra. Nefa ny eto Madagasikara, ao avokoa ity karazany rehetra ity. Tsy fantatra intsony hoe iza avy…
* Aiza ho aiza ny hoe demokrasia amin’izany?
– Nefa amin’ny lafiny iray, azo lazaina hoe demokrasia koa izay fahamaroan’ny kandidà izay amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao. Nefa lasa demokrasia “sauvage” ny eto amintsika satria tsy misy fetrany. Ny isan’ny antoko politika eto amintsika izao, efa tafakatra 300 any ho any. Aiza no ahitana izany eran-tany? Ny manahirana, be loatra izany ny fahamaroan’ny antoko sy ny hevitra…
* Inona àry ny tokony hatao hanarenana izany?
– Ny tokony hatao hanarenana izany rehetra izany, ferana ny isan’ny antoko politika eto amintsika. Hatao tsy latsaky ny 10 000, ohatra, ny mpikambana amin’ny fahazoana manangana antoko politika. Maty ho azy avokoa ireo antoko politika mandinidinika eto amintsika ireo amin’izany. Misy, ohatra, ny antoko politika eto amintsika, izy mivady miampy ny zanany.
Manaraka izany, fepetra takina koa ny hoe: tsy maintsy mahahenika an’i Madagasikara ny antoko politika satria mieritreritra hitondra an’i Madagasikara izy. Farany, tsy maintsy mandrotsaka olona hofidina amin’izay fifidianana rehetra atao. Manomboka any amin’ny fifidianana lehiben’ny fokontany izany ka hatrany amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Raha tanterahina izay, tsy misy afa-tsy antoko roa na telo eo sisa. Apetraka amin’ny lalàna mifehy ny antoko politika izany.
* Ahoana ny amin’ny fisian’ireo antoko politika sasany tsy manao afa-tsy mialokaloka fotsiny amin’ny antoko hafa?
– Izay tokoa ny zava-mitranga… Raha vao misy olona mirotsa-kofidina, ohatra, na atolotry ny antoko politika iray: mandeha ny filazana hoe manohana azy ny antoko politika izao na izatsy. Amin’izany, nahoana no tsy ravana ny antoko politika misy ny tena? Satria mitovy izany ny ideolojia sy ny vinam-piarahamonina na ny fandaharanasa. Izay ny tena olana. Rehefa misy fifidianana, mila mandrotsaka kandidà ny antoko politika misy ny tena; raha tsy izany, ravana…
Ny ananganana antoko politika ange ka hoe manana vinam-piarahamonina ny tena. Ampitaina amin’ny vahoaka malagasy izay vinam-piarahamonina izay, ary mifidy ny tena izy rehefa tonga ny fifidianana. Rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izany ny tena, mampihatra izay vinam-piarahamonina izay, fa tsy hoe hanohana an-dRanona na Ranona izay antoko politika mijoro. Inona ny dikan’izany?